Gudoomiyaha degmada Benderbayla oo ka hadlay kalluun xeebta kasoo caariyay – Radio Daljir
Janaayo 19, 2013 4:54 b 0
Benderbayla, Jan 19 – Maamullka degmada Benderbayla ee gobolka Karkaar ayaa ku goodiyay inay talaabo ka qaadayaan maraakiib uu tilmaamay inay jariif ku hayaan xeebaha degmada Benderbayla, iyadoo uu tilmaamay kalluun badan inuu kasoo caariyay xeebta degmada Benderbayla.
Gudoomiyaha degmada Benderbayla Saciid Aadan Cali ayaa waraysi uu siiyay radio Daljir waxaa uu ku sheegay maamulka degmada oo kaashanaya ciidamo abaabulan oo deegaanka inay weeraro ku qaadayaan maraakiibta jariifka ku wada xeebta degmada.
Waxaa dhinaca kalle uu sheegay inaan la ogolaan karin ruqsad kalluumaysi in? loo ogolaado maraakiibta waawayn ee jariifka oo uu ku tilmaamay kuwa baabi’inaya xeebta deegaanka.
Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland ayaa dhawaan soo saartay go’aamo lagu mamnuucayo jariifka badda , hasse ahaatee weli ma muuqato talaabooyin arinkaasi dhaqangal kadhigi kara oo ay qaaday wasaaradda.
R.W oo Talaabo Horumar leh ku tilmaamay Aqoonsiga Dowladda Mareykanka